पाल्पा–२ मा कसले मार्ला बाजी ? – Palpa Samachar
पाल्पा–२ मा कसले मार्ला बाजी ?
By palpa samachar	 On Nov 22, 2017
पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पुर्व मन्त्री समेत रहेका सोम प्रसाद पाण्डेय र पुर्व सांसद हरी प्रसाद नेपाल बिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
लोकतान्त्रीक गठबन्धनको तर्फबाट नेपाल र वाम गठबन्धनको तर्फबाट पाण्डेयबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । नेपाल र पाण्डेय दुवै आआफ्ना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन् । राज्य पुनः संरचना गर्नुभन्दा पहिले २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाण्डेय क्षेत्र नं. २ र नेपाल क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
राज्य पुनः संरचना पछी दुई क्षेत्र कायम भई अहिले दुवै नेताहरुले एउटै निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । २०७० को निर्वाचनमा नेपालले १३ हजार १ सय ३५ मत र पाण्डेयले १३ हजार १ सय ९३ मत ल्याई संविधानसभा सदस्यमा बिजयी भएका थिए । दुवै नेता जनतामाझ राम्रो छवी बनाउन सक्ने खुवी भएका मानिन्छन् । नागरिकले दुवै नेतालाई चुनावी तथा विकासप्रेमी नेता मान्ने गरेका छन् । दुवैले पटक पटक विकास गर्ने मौका पाएपनी चित्तबुझ्दो भने कसैले गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ ।
दुुवै उम्मेदवारले पाल्पामा प्रयाप्त खानेपानी, व्यवस्थित पर्यटन, प्रदेशस्तरिय संग्रहालय र रोजगारी सहितको उद्योग लगाएतलाई चुनावी प्रतिवद्धता बनाएका छन् । दुवैले चुनावि घोषणापत्र लेखनमा भने पाल्पाको विकासका लागी कुनै कसर छाडेका छैनन् ।
स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ५४ हजार ९४, काँग्रेसले ४७ हजार २ सय ३ र माओवादीले १६ हजार २ सय ६६ मत ल्याएको थियो । अहिले वाम गठबन्धनको मत जोडिदा काँग्रेसको भन्दा २३ हजार १ सय ५८ मतले अघि रहेको देखिन्छ ।
यद्यपी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन पछी जिल्लामा करिब १८ हजार ७ सय मतदाता थपीएका छन् । सांसदका लागी २०७० सालमा खसेको मत परिणामलाई हेर्दा वाम गठबन्धनको पाल्पाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र बलियो देखिन्छ तर निर्वाचनपछि थपिएको मतदाताको मत नै निर्णायक हुने दलहरुले अनुमान गरेका छन् । दुवै दलका उम्मेदवार, नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो पक्षमा मत माग्ने र प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई तिव्र बनाएका छन् ।
भैरव बहुमुखी क्याम्पस ११ औँ वर्षमा प्रवेश